आठराईबासीसँग प्रधानमन्त्रीले सोधे – भित्रिया र खमारेमा आँप कटहर छन् कि छैनन् ? « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आउजाउ गर्ने थुप्रै नेता, कार्यकर्ता, मतदाता, शुभचिन्तक हुन्छन् । बिहान सबेरैदेखि रातिसम्म दैनिक सयौं मानिसहरुसँग प्रधानमन्त्रीको भेटघाट र अन्तक्र्रिया हुन्छ । तर बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीको करिब १५ मिनेटको भेटघाट भने बिल्कुल फरक रह्यो । सधैं राष्ट्रिय राजनीति र विकासका ठूला ठूला नीति र योजनाका बिषयमा छलफल हुने यस ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जन्मस्थानको चर्चा र बाल्यकालका साथीसंगीलाई सम्झना गर्नुभयो ।
चुहानडाँडा विमानस्थलका लागि रकम माग गर्नका लागि आठराई गाउँपालिकाबाट एउटा समूह प्रधानमन्त्री निवासमा आएको थियो । त्यहाँ अधिकांश उतै आठराई मै बसोबास गरेकाहरु र केही झापा र राजधानीमा बसोबास गरिरहेका तर आठराईलाई माया गर्नेहरु थिए । आठराईमा विमान स्थलका लागि पैसा माग्न आएको समुहका बारेमा पूर्व जानकारी पाएका प्रधानमन्त्री ओली अनौपचारिक पोषाकमा नेकपाका महासचिब विष्णु पौडेल सहित बैठक कक्षमा प्रवेश गर्नुभयो । “के छ आठराईको खबर ?” प्रधानमन्त्रीको जिज्ञासा थियो । आगन्तुक सबैले आठराई विमानस्थलका लागि रकम छुट्याउन माग गरे । “नीति कार्यक्रममा आइसकेको छ । बजेटका लागि चिन्ता नगर्नु” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।
जन्मस्थान आठराई इवा छोडेको ५८ बर्षपछि पनि आठराईका चोकचोकमा नाम प्रधानमन्त्रीले फटाफट भनेको सुनेपछि आठराईबासीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई अहिले पनि उही इवाकै छिमेकीकै रुपमा महसुष गरे । चुहानडाँडाँ विमानस्थलमा रकम माग गरिएको कागज लिएर प्रदेशसभा सांसद तेजमान कङ्दङ्वा प्रधानमन्त्री नजिक गए । तेजमानको हात समाएर प्रधानमन्त्री ओलीले महासचिव पौडेललाई चिनाउदै भन्नुभयो “उ मेरो गाउँले भाइ हो । अहिले प्रदेशसभाको सांसद ।” प्रधानमन्त्रीले फेरि सम्झनुभयो “अर्का तेजबहादुर कङदङ्वा पनि हुनुहुन्छ । वहाँ चाँही विर्तामोडमा हुनहुन्छ । तेजप्रसाद कङदङ्वाचाँही मेरै सामु हुनुहुन्छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले बालसखा चन्द्र कन्दङवाको पनि सम्झना गर्नुभयो । “मेरो बाल्यकालको साथी चन्द्र । म भन्दा सिनियर पनि हुन् तर पनि हामी साथी साथी थियोैं । हामीले एकैदिन २०२६ साल फागुन १२ गते नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिएका । अर्का सूर्य कङदङवा त मेरा गुरु नै हुनुभो ।” प्रधानमन्त्रीलाई आठराईबासीले भने “हामीलाई पानीको चाँही सारै समस्या छ”
यति भनिसक्दा प्रधानमन्त्रीले आफूले बाल्यकालमा पानी खाने गरेको इवा कै चुच्चेधारो सम्झनुभयो । “उ बेला चुच्चेधाराको पानी अजुंलीमा थापेर खान कम्ती मजा हुँदैन थियो,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो “अहिले सुकेर तिर्र….मात्र पानी आउँदो रहेछ । ५ बर्ष अघि आठराई गएको बेला चुच्चे धाराको रवाफ दिंदै श्रीमतीलाई पनि पानी खुवाउन लिएर गएको त पानी सुकिसकेछ । त्यसपछि आँफै हिस्स परियो ।”
पानीको प्रसंगमा प्रधानमन्त्रीले संक्रान्तिको याकुम्बा गढी पनि स्मरण गर्नुभयो । “गढी के भएछ त । त्यहाँबाट आरोलो लागेपछि त थुप्रै पानीका मुल थिए पहिला त,” उनले भने । प्रधानमन्त्रीको यो जिज्ञासा सुनेपछि आठराईबासीले नेपालका गाउँबस्तीमा पानीका मुल सुक्नाका केही गम्भिर कारणहरु एकपछि अर्को गर्दै प्रधानमन्त्री समक्ष राखे । पूर्वप्रधानाध्यापक आरसी थपलियाले सुरु गर्नुभयो “जतासुकै मोटरबाटो खनियो ।
यसले पानीको मुललाई धक्का दियो । मुलहरु अन्तै सरे ।” भीष्म थपलियाले थप्नुभयो “भैंसी पाल्ने चलन हरायो । जसले गर्दा आहाल मासिए । आहाल नभएपछि पानी जम्मा हुन र रसाउन पाएन । पानीका मुल सुके ।” टिका उप्रेतीले थप्नुभयो “पहिला जस्तो साउने झरी पर्न छाड्यो । त्यतीबेला साउने झी हप्तादिनसम्म बिस्तारै बर्सीरहन्थ्यो । त्यसले जमिनको भित्री भागसम्म पानी जान्थ्यो । अहिले दर्र…पानी पर्छ जमिनको सहतमै बगेर सकिन्छ ।” भीम घिमिरेले अर्को कारण थप्नुभयो “अहिले सानो मुलकतै भेटिए मानिसले सुविधाका लागि पाइप घुसाएर घर मै
पानी पु¥याउँछन् । जसले गर्दा पानीको प्राकृतिक बहाव मासियो । अनि हामी काकाकुल भयौं ।” प्रधानमन्त्री ओलीले आठराईमा एउटा फूटबल मैदानको प्रस्ताव गर्नुभयो । “तपाईंहरुसँग छ भने जग्गा दिनुहोस । हैन भने म जग्गा दिन्छु ,” प्रधानमन्त्रीले सम्झनुभयो, “छन् त चुहानडाँडाँमा उप्रेतीटार,थपलीयाटार ।”